Ra’iisul Wasaare Khayre oo Midowga Yurub uga mahadceliyey garab-istaagooda Soomaaliya. – PuntlandNews24
Ra’iisul Wasaare Khayre oo Midowga Yurub uga mahadceliyey garab-istaagooda Soomaaliya.
Muqdisho, 16 August 2017 – Ra’iisul Wasaaraha Xukuumada Federaalka Soomaaliya Mudane Xasan Cali Khayre oo maanta kulan la qaatay Safiirka Midowga Yurub ee Soomaaliya Veronique Lorenzo, iyadoo soo gaarsiisay warqad ay ka siday Midowga Yurub oo dawladda Federaalka loogu caddeynayey garab-istaaga iyo wadashaqeynta buuxda.
PRESS STATEMENT:- Puntland Statement On The Gulf Crisis.
Madaxweyne Farmaajo“Dr. Cabdiraxmaan waxa uu kaalin wayn ka qaatay sare u qaadista magaca Soomaaliya ay ku leedahay Caalamka”